Imitha yeBlaze: Iplatifti yokuVavanya uMthwalo kubaPhuhlisi | Martech Zone
Imitha yeBlaze: Iplatifti yokuVavanya uMthwalo kubaPhuhlisi
NgoLwesine, Meyi 8, 2014 Douglas Karr
BlazeMeter ibonelela abaphuhlisi ngeqonga lokuvavanya umthwalo wokulinganisa nayiphi na imeko yomsebenzisi yezicelo zewebhu, iiwebhusayithi, iiapps eziselfowuni okanye iinkonzo zewebhu, ezinokutsha ukusuka kwi-1,000 ukuya kwi-300,000 + yabasebenzisi ngaxeshanye. Uvavanyo lomthwalo lubalulekile kwiziza nakwizicelo kuba uninzi lwenza kakuhle phantsi kophuhliso, kodwa lwaphuka phantsi koxinzelelo lwabasebenzisi ngaxeshanye.
I-BlazeMeter yenza ukuba abaphuhlisi kunye nabayili beemetwork basebenzise ngokukhawuleza ukufumanisa ukuba loluphi uhlobo lomthwalo kwiwebhu yakho
kunye neesayithi ezihambayo okanye iiapps ziyakwazi ukuphatha. Iimpawu zeBlazeMeter zibandakanya:
Akukho Mthengisi uValiweyo-ngaphakathi - iyahambelana I-Apache JMeter ke ayisiyotekhnoloji yokuthengisa. Sebenzisa nasiphi na iskripthi seJMeter okanye iplagi ngaphandle kwesidingo salo naluphi na uhlengahlengiso.
Ulondolozo Simahla -Akukho ukuseta okanye ufakelo olufunekayo kuba luvavanyo lwentsebenzo esekwe kwilifu.
Ukwanda ngokuzenzekelayo -Uvavanyo lwabasebenzisi abangama-300, 3,000 okanye 300,000+. Itekhnoloji yokubonelela isungula ngokuzenzekelayo kwiimfuno, iiseva ezinikezelweyo kuvavanyo ngalunye.
UkuziSebenzela kunye nokuFunwa -Akukho mjikelo mde wokuthengisa okanye wokubonelela ngezixhobo kwangaphambili. Ufumana ukufikelela okungafakwanga kubungakanani bovavanyo olungenamda 24/7.
Ukubeka iliso kwicala lesicelo -Ukubeka iliso kwiNkqubo yokuSebenza ngokuSebenza (i-APM) yedatha yenqanaba lokusebenza elineenkcukacha zokukhomba kunye nokuhlalutya ukusebenza kweebhotile.
Integration -Udityaniso lwe-APM kunye nezisombululo eziphezulu zomgangatho njenge I-Relic entsha bonelela ukuphela kokubonakala kwiseva, usetyenziso (iwebhu kunye neselfowuni), kunye nokujonga amava omsebenzisi. Ukudityaniswa kubandakanya iJenkins CI (CloudBees), i-Bamboo (iAtlassian), iTeamCity (iJetBrains), iPlagi yeJMeter nabanye.
Inkxaso yeProtocol ebanzi kunye nokuXhotyiswa okuPhuculweyo -Yila iimvavanyo ezinzima ezilinganisa umsebenzi wokwenyani kwindawo yakho okanye usetyenziso.
Inene kwaye ilungile iServer Load -Yila iindwendwe ezivela kwiindawo ezininzi zeendawo zonke ngaxeshanye kwaye usasaze umthwalo kumaseva amaninzi ukubandakanya ukulungelelaniswa komthwalo.
Inkxaso yeMfono -Uvavanye zombini usetyenziso lweselfowuni kunye neewebhusayithi ezinesixhobo sokurekhoda. Vavanya ngokuchanekileyo ukusebenza kwefowuni kunye nokulinganisa kwenethiwekhi yeselfowuni.
Ukunika ingxelo ngeXesha leNene -Jonga zombini umfanekiso omkhulu kunye nenqanaba lamatriki enqanaba elinengxelo yempophoma.
tags: Iapache jmeteriapmUkuSebenza kokuSebenzaatlassianbambooblomemithaisisombululo sokuvavanywa komthwalo esisekwe kwilifuYinyanijenkins cijetbrainsjmeterLatencyuvavanyo umthwaloukuvavanywa kokulayisha kwesoftwareuvavanyo umthwalo mobileii-saasiqelaUvavanyo lwesicelo sewebhu
Uyakha njani iFunnel yeNtengiso yezeNtlalontle